Ragga Ayaa Jacaylka Uga Nugul Dumarka! - Daryeel Magazine
Ragga Ayaa Jacaylka Uga Nugul Dumarka!
Marka laga hadlayo jacaylka ragga iyo ka dumarku waa wax aad u kala fog laakiin labaduba wax way jeclaadaan Ninku qofka dumarka ah ee uu jeclaado lagama yaabo in ay niyadiisa ka baxdo waligii, ama uu ku dhaco jacayl cusubi, waxa taa inooga marag ah ragii jacaylka u god galey ee uu ugu horeeyey Cilmi Boodhari oo aynu wada heyno jacaylkiisii iyo sidii ay ugu dhadhami waydey gabadh kale.
waxa xasuus mudan Alle ha unaxariistee Sulub Cumar oo ay heesihiisii ka mid aheyd (ANiga iyo Hilbaheygii kala hoyaney, ereygan oo kamid ah heestii Magool ee Sideeda Sinta ma isa saarnaa?), oo isagana la sheegey inta gabadhii uu jeclaa laga guursadey in uu diidey in uu niyada ka saaro oo lasheegey inuu balan qaadey in uu guursan doono marka la soo furo dabadeed sidaa ku
hooydey, Haddaba Ninka ma hawlyara siduu gabadh u jeclaado inta badan laakiin haddeey taasi dhacdo waligii ma illaawo.
Dumarka iyo ragga keebaa u jilicsan jacaylka?. Dumarka waxa fudud in uu jacaylku ku dhaco, waxana laga yaabaa in gabadhu ninka u yimaada labagoor ee indhaha intuu is daba dhigo been ku usheega ay qalbigeeda dhigto hadii ay sidaas ku jeclaato oo ay meelfog kala taagaan ama muddaba aaney is arag waxa macquul ah in hadii uu mid kale u yimaado in jacaylkii gabadha lagu beerey uu ku masaxo aftahanimadiisa oo uu kubeero mid cusub.
Waxyaabaha kalifa in ay gabadhu markiiba jacaylkii hore kabaxdo waxa kamid ah inuu iloowshuhu dumarka ku badanyahey taas oo ah mid uu ilaahey ku abuuray, Tusaale gabadhu waxa ay dakhso ku ilawdaa xanuunka foosha si ay tarantu u badato, waxa kale oo aynu ognahay in aanay lahayn ilaa hadda gabadh jacayl udhimatey wallow la sheego waxa isu dhintay Qays iyo Layla, Hodan iyo Cilmi Boodhari waxan sheekooyin kaas ama qisooyin kaas ku cad in jacaylku ku horeeyay ninka.
Waxyaabaha Ugu Badan Ee Raggu Ay Ku Soo Jiitaan Dumarka Odhaahyo Xikmadeysan Oo Ku Saabsan Isfahamka Ragga & Dumarka 3 Sababood Oo Dumarku Uga Hadal Badanyihiin Ragga Jacaylka Rabbi